Annaga - Hexinyuan Supply Chain Co., Ltd.
Ku saabsan HOPESAME
Hal qayb oo ka mid ah Hexinyuan Supply Chain Co., Ltd.
RAJOWaxay ku taal magaalada Shishi, Quanzhou, Gobolka Fujian, Shiinaha.Waa asalka "Waddada Xariirta Badda".Magaalada Shishi waxay caan ku tahay dharka oo caan ku ah magaalada dharka..Waa magaalada ugu weyn ee dharka ee Aasiya waana mid ka mid ah saldhigyada wax soo saarka dharka iyo dharka iyo xarumaha qaybinta ee China.It waxay leedahay silsilad dhamaystiran oo dhar iyo dhar ah oo daboolaysa alaabta ceeriin, miiqinta iyo tolida, bleaching iyo dhamaystirka dheeha, farsamaynta dharka. ,wax soo saarka qalabaysan, R&D iyo design, marketing iyo beeraha kale.
RAJOIn ka badan 10 sano ayaa diiradda lagu saaray samaynta dharka iyo adeegyada gaarka ah ee dharka.Waxaan la shaqaynaa boqolaal nooc oo dhar ah oo aduunka oo dhan ah.Waxaan leenahay alaab xirfad leh iyo alaab-qeybiyeyaal dheeri ah, sida daabacaadda caqliga leh, daabacaadda elektiroonigga ah ee caqli-gal ah iyo dhammaan noocyada beeraha.
Kooxdayadu waxay ku adkaysanayeen falsafada Ilaah ee maamulka ee R&D, binta, kontoroolka tayada, saadka, adeegga iibka ka dib, iwm. Shirkadeena waxaa ka go'an in ay siiso macaamiisha adeegyada ugu wanaagsan ee habaysan, Fiiro gaar ah si faahfaahsan kasta waa fiiro gaar ah!
Laga soo bilaabo naqshad tayo leh oo OEM & ODM wax soo saarka iyo dhoofinta. Waxaan la shaqaynaynay macaamiisha caalamiga ah oo aan bixinay adeeg hal-joojin ah oo laga soo bilaabo naqshad la habeeyey ilaa wax soo saarka iyo dhoofinta alaabada adduunka oo dhan.TheRAJOKooxdu waxay khibrad dheer u leedahay wax-soo-saarka habaynta dharka iyo dhoofinta ganacsiga caalamiga ah.Waxaan bixinaa adeegyada OEM ee dhammaan noocyada tolmo iyo tolid alaabta dharka, sida waafaqsan design style macaamiisha, size, dhar, daabacaadda, midabka, tirada, logo, baakadaha, iwm Codso in ay aado wax soo saarka.Wax soo saarka badbaadada iyo mas'uuliyadda bulsho waa naga go'an tahay in aan ku adkaysanno samaynta, warshadeena waxay ka gudubtay shahaado SGS, ITS, BV iyo maamulada kale.Si joogto ah u wanaaji habka wax soo saarka, warshaddu waxay soo bandhigaysaa qalabkii ugu dambeeyay ee caqli-gal ah, guddiga CAD, goynta dharka tooska ah, mashiinnada dharka kombuyuutarka ee kala duwan.
Bixi Adeegga Habboon ee ugu Wanaagsan, Adeegyada Xirfadlaha ah iyo wax soo saarka tignoolajiyada cusub ayaa ka caawiya macaamiisha inay helaan qiimo iyo badeecado tartan badan.
waayo-aragnimo qani ah:
Hopesame waxa ay diiradda saareysay samaynta dharka iyo adeegyada gaarka ah ee dharka in ka badan 10 sano.Waxaan la shaqaynaa boqolaal nooc oo dhar ah oo aduunka oo dhan ah.
OEM waxaan ku qalabaysan nahay koox isgaarsiin ganacsi oo xirfad leh, kooxda wax soo iibsiga dharka iyo accessories, kooxda caddaynta degdeg ah, u habbee alaabta sida waafaqsan baahidaada
Kooxda Xirfadlayaasha ah:
Silsiladayada sahayda waxaa lagu dhammeyn karaa 72 saac, Waxaan leenahay saddex nooc oo nidaamka sahayda: OEM, ODM iyo RTS.
Waxaan ku qalabaysan nahay nidaamka wax soo saarka xirfadeed iyo nidaamka kormeerka tayada.Alaabooyinka ayaa maray xakamaynta tayada adag
Ragga Feeryahanka Kooban, Ragga Kastuumada Feeryahanka Custom, Niman kastuumo, Dharka hoose ee ragga, Gents Surwaalka, Dharka hoose ee ragga,